Teepụ ịwụpụ nwere ike inyere gị aka ịbawanye mkpụrụ na arụmọrụ mmiri, yana meziwanye akuku site na itinye mmiri na fatịlaịza ebe ị chọrọ ha. Họrọ emitter spacing site na 10 ruo 60 cm-na-enweghị ego na-abawanye -for kpọmkwem ọnyịnye na mgbanwe mgbe ị na-emepụta usoro gị. Chọta teepu zuru oke maka ngwa gị yana ọtụtụ ụdị ọnụọgụ dịnụ, mgbidi mgbidi, na diameters dị n'ime.
Brand aha: Greenplains
Ngwa: General, Ogbugba mmiri n'ubi
Ojiji: Sistemụ Mmiri rigchekwa Mmiri
Teknụzụ: Teknụzụ Na-echekwa Mmiri
Emitter spacing nhọrọ maka ala niile
Nhọrọ zuru oke nke ọnụọgụ ego
Inyefe mmiri na fatịlaịza zuru oke
Elu clogging eguzogide
Ihe ọkụkụ na-emepụta ihe
Usoro ike ndọda
1. Nzaghachi ọsọ ọsọ, ịrụ ọrụ nke ọma, na ọkachamara n'ime awa 24, awa iri na anọ nke ọrụ ntanetị.
2. Afọ 10 nke n'ichepụta ahụmahụ n'ọhịa ugbo.
3. Nkwado teknụzụ na azịza site n'aka onye isi injinia.
4. Jighi àgwà akara usoro & otu, elu aha na ahịa.
5. N'ihe zuru ezu nke ngwaahịa ogbugba mmiri maka oke.
6. Ọrụ OEM / ODM.
7. Nabata usoro nlele tupu Mas.
Nke gara aga: Nnukwu Agba Sprinklers
Osote: Neo PC ọgba aghara dripper
1. you bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ndị a maara nke ọma emeputa nke mmiri usoro na ụwa na ihe karịrị 10 afọ nke ụlọ ọrụ ahụmahụ.
2. you na-enye ọrụ OEM?
Eeh. Ngwaahịa anyị dabere na GreenPlains Brand. Anyị na-enye ọrụ OEM, nwere otu ogo ahụ. Ndị otu R&D anyị ga-emepụta ngwaahịa dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
3. Gini bu MOQ gi?
Ngwaahịa ọ bụla nwere MOQ dị iche iche ， Biko kpọtụrụ ndị ahịa
4. Kedu ebe ụlọ ọrụ gị dị?
Emi odude ke Langfang, HEBEI, CHINA. Ọ na-ewe awa 2 site na Tianjin gaa ụlọ ọrụ anyị n'ụgbọ ala.
5. Kedu otu esi enweta ihe nlele?
Anyị ga-ezitere gị ihe atụ ahụ n'efu ma chịkọta ibu.